Fihavanana sy Firaisan-kina malagasy – Malag@sy Miray
Nisy hira nandeha tamin’ny fahitalavitra teo aloha teo somary nampitsiky kely ahy isaky ny atoandro satria nandeha foana. Tsara tarehy ilay mpihira sady mahay mandihy fa ilay hira kosa aloha tena tsy tapako ny foto-keviny sy ny vonto atiny. Soa fa mazava ny lohateniny : « fihavanana malagasy ». Nahalasalasa saina ny tena ka nampanao hoe « aiza ho aiza » marina moa izao ny toeran’ity soatoavina malagasy izay tsy inona fa fihavanana ity »? Mbola eo foana ve sa aleo very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola?Resaka politika sy ady seza efa mankaleo sy mampadilo sofina no heno lava reny tato ho ato. Izy ireo dia toa tsy ahitana taratra izany firaisan-kina na fihavanana izany. Nefa izy ireo no fitaratr’i Gasikara ka mampianatra ny olona ny fomba fanao vaovao. Ny fomba fanao vaovao sy malaza? « mitadiava seza mba ho tafita », ka rariny raha mipoitra ny ambany tanàna mitaky ny anjarany fa leo ny atao tohatra fiakarana. Fa misy ihany kosa aloha no mbola miresaka fihavanana e: « mba afaingano moa iny taratasy iny amin’ny anaran’ny fihavanantsika » dia hoy ny iray « havako, havako, havana raha misy patsa ». Aza adino fa raha ho avy ny loza, patsa iray tsy omby vava ary tain’akoho mety ampisolifatra. Tena niova ny toe-tsaina e, izay angamba ilay fivoarana. Fa raha izany aleo mivoatra any amin’ny lalana hafa mety hampandroso fa tsy io lalana io.
19 octobre 2009 à 9:32
Raha voaverina ny fihavana dia hiverina koa ny valin-tànana. Ary dia tsy hisy intsony ny fadiranovala (manana tany fa tsy mahavita trano hisitrihanaà satria ny eo an-tanàna ihany dia afaka han,ampy amin’ny fananganana. Ho tonga anie ny Fihavanana!
Raha voaverina ny fihavanana dia hiverina koa ny valin-tànana. Ary dia tsy hisy intsony ny fadiranovana (manana tany fa tsy mahavita trano hisitrihana) satria ny eo an-tanàna ihany dia afaka hanampy amin’ny fananganana. Ho tonga anie ny Fihavanana! Ho foana anie ny fitiavan-tena! Hahita ny anjara-masoandrony anie ny tsirairay!
2 novembre 2009 à 20:19
C’est vrai que ton article a été utilisé lors du Soratononina 2009? Si confirmé, félicitations! 🙂
Oki, confirmé, désolée de ne pas avoir mis le lien de suite 🙂
19 novembre 2009 à 13:39
Cool, sincèrement c’était une grande surprise. Vive la langue malagasy.
2 décembre 2011 à 20:08
M’y Life is for living